Topy ny Halloween amin'ny Frankfort Avenue
Halloween Fun ao amin'ny Frankfort Avenue
Ny Frankfort Avenue Historic dia mahafinaritra mandritra ny taona, miaraka amin'ny fivarotana marobe, fialamboly, ary ny olona mijery. Ary rehefa tonga ny volana oktobra, dia feno fanahin'ny Halloween ny manodidina. Raha mipetraka na mitsidika ny Frankfort Avenue ianao, alaivo amin'ireo zava-mitranga 5 amin'ny Halloween ireo.
Anontanio izay olona any Louisville momba ny fanangonana Halloween ao amin'ny Hillcrest Avenue ary azonao antoka ny handre tantara iray.
Ity bandy ity dia voaravaka foana, fomban-drazana isan-taona. Fialan-tsasatra ho an'ireo mpitsikilo na mpitsabo ary na iza na iza liana amin'ny sainy sy ny orana, ireo mpitsidika dia mahita trano fonenana dimampolo eo anelanelan'ny Brownsboro Road sy ny Frankfort Avenue izay miakanjo ny Halloween. Ampio ny vondrom-piarahamonina : Mitondrà entana entana na sakafo tsy azo tsapain-tanana mba hanomezana fanampiana ho an'ny Minisitry ny sampan-draharahan'ny United Crescent Hill. Samy misy tahirin-tsakafo ao amin'ny andaniny tsirairay.
Fitiavan'i Louisville, Carmichael's dia misy hetsika mandritra ny taona. Mazava ho azy fa maro amin'izy ireo no mitranga. Anisan'izany ny tantaran'ireo tantara sy ny fankalazana ny Halloween.
Crescent Hill Library ao amin'ny 2762 Frankfort Avenue dia mankalaza Halloween Storytimes. Misy ny sasany ho ny talentan'ny Halloween ao amin'ny tranomboky manerana ny tanàna, mifandraisa amin'ny Tranombokim-bahoaka Free Library any Louisville mba hampahafantarana ny zava-nitranga nandritra ny fizaran-taona.
Manana hetsika maimaimpoana maimaim-poana ny fianakaviana Advantage Crescent Hill.
Ohatra, ny alina chili dia ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Peterson-Dumesnil, 301 S. Peterson Avenue mandritra ny vanim-potoan'ny Halloween. Mitondrà kiraro (raha tianao) ary ento ny sakafo hizarana. Na ireo izay tonga lafatra aza dia afaka mankafy alika mafana, chili, s'mores, tantara an-kisoa ary maro kokoa. Mifandraisa amin'ny Kaominina Community Crescent Hill amin'ny antsipiriany.
Maker's Mark Halloween Hop
Ho an'ny vanim-potoana Halloween, ny Frankfort Avenue dia manomana marika manokana ho an'ny Halloween Halloween Hop. Betsaka ny fiaramanidina handeha amin'ny Frankfort Avenue avy ao amin'ny Lane Cannon mankany River Road. Ampirisihina ny firavaka ary maro amin'ireo toeram-pambolena no hanolotra ny marika maker Mak Mark manokana. Ho an'ny fianakaviana, misy fitsikerana na fitsaboana ao amin'ny The Avenue.
Hevitra momba ny lozam-piaramanidina
Misy IKEA ve any akaikin'i Louisville?
Fialam-boly tsara indrindra an'ny Louisville Pizza
Zavatra ho an'ny ankizy: Louisville KY
Fety Maple Syrup
Ahoana ny fampiasana ny anaran'ny Priceline ny volanao manokana ho an'ny hotely
Ny 9 Best BYOP Italiana tsara indrindra any Philadelphia
Vato mitandahatra any Minneapolis, St. Paul ary Minnesota
Inona no hitranga rehefa mividy trano tranolay vaovao
Tranombakoka fankalazana ny Holocaust any Washington, DC
Chuletas Can-Can, Porky Cookie Delicious
Ny Top 9 zavatra hatao any Brooklyn Heights
Ahoana no holazaina raha tena tsara ny kafe
Taridalana ho an'ny mpivady iray ho an'ny Riandranon'i Niagara
Top 7 Restaurants tsara indrindra any Rio de Janeiro
Toeram-pisakafoanana izay ananan'ny ankizy misakafo maimaim-poana any Phoenix Arizona